ဒိုင်းခင်ခင် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒိုင်းခင်ခင် (၁၈၆၃ ဝန်းကျင် - ၁၈၈၂) သည် သီပေါမင်းလက်ထက် စုဖုရားလတ်အောက်ရှိ အပျိုတော်ဖြစ်ပြီး သီပေါမင်းနှင့် နောက်တိုးသံယောဇဉ်ပြဿနာကြောင့် လူသိများခဲ့သည်။
ကနီမြို့စားနှင့် မြို့စားကတော်တို့မှ ၁၈၆၃-ခု ဝန်းကျင်၌ မွေးဖွားသည်။ အမွေးခက်သဖြင့် ဆွဲရ ဟု ငယ်မည်တွင်သည်။  အမည်ရင်းမှာ ခင်ခင်ကြီး ဖြစ်သည်။
နောင်သော် သားသမီးမထွန်းကားသော ဒိုင်းအတွင်းဝန် ဦးဘိုကြီးနှင့် ဝန်ကတော်တို့က မွေးစားသဖြင့် ဒိုင်းခင်ခင်ဟူ၍ အမည်တွင်လာသည်။ ကနီမြို့စားမှာ ဝန်ကတော်၏မောင် တော်စပ်သည်။ 
သီပေါမင်း လက်ထက်၌ ပြိုင်ဘက်ဖြစ်လာနိုင်သော မင်းညီမင်းသားအားလုံးကို သုတ်သင်ပြီးနောက် ဇာတာတက်စေရန် သီရိပဝေသနာ ရာဇဘိသေက ထပ်ရန် ကြံသည်။ နဝရတ်ခြယ် ရွှေဖလားကိုင်ရန် အပျိုတော်ရွေးရာ မောင်မောင်တုတ်က ဒိုင်းခင်ခင်ကို စာရင်းသွင်းသဖြင့် ဖလားကိုင်ရပြီး စုဖုရားလတ်၏ အပျိုတော်ဖြစ်လာသည်။ 
ငယ်သူငယ်ချင်း မောင်ဖေငယ်က ဒိုင်းခင်ခင်အားလည်းကောင်း၊ မောင်မောင်တုတ်က သီပေါမင်းအားလည်းကောင်း ဘေးတီးရာ စုံမက်သွားကြသည်။ စုဖုရားလတ်မှာ ဒုတိယကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်ဖြစ်၍ သီပေါမင်းနှင့် လက်လှမ်းမီခဲ့သည်။ မီးဖွားပြီးနောက် တောင်ဥယျာဉ် ပန်းခုံတော်၌ လူပျိုတော်အသွင် ဝတ်ဆင်ကာ သီပေါမင်းနှင့် ချိန်းတွေ့နေသော ဒိုင်းခင်ခင်ကို စုဖုရားလတ်မိ၍ ရိုက်နှက်ကာ ထောင်သွင်းချသည်။ 
၁၈၈၂-ခု၊ ဧပြီလတွင် နန်းဝတ်နန်းစားချွတ်၍ ဒူးထောက်၊ ဦးမော့ကာ လည်မြိုအား ဝါးစိမ်းတုတ်နှင့် ရိုက်လျက် အဆုံးစီရင်ခံရသည်။ မွေးစားမိဘများဖြစ်သည့် ဒိုင်းဝန်နှင့် ကတော်တို့သည်လည်း အဆစ်ပါ အဆုံးစီရင်ခံရသည်။
↑ Prince Damrongrāchānuphāp (1991) "Journey through Burma in 1936". River Books.
↑ စိမ့် (ပညာရေး)။ "ဒိုင်းခင်ခင်"။ ယဉ်ကျေးမှု စာပေတိုက်၊ ရန်ကုန်။ ၁၉၇၆။
↑ ဒဂုန် ခင်ခင်လေး (၂၀၀၄) "ရတနာပုံ၏ နိဒါန်းနှင့် နိဂုံး"။ တော်ဝင်မြို့မ စာအုပ်တိုက်၊ ရန်ကုန်။
↑ မြကေတု (၁၉၆၆) "နန်းဓလေ့ မှတ်တမ်းများ"
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဒိုင်းခင်ခင်&oldid=680993" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၂၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။